Maka ny fibahanana aterineto i Aostralia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Avrily 2019 4:18 GMT
Natao ho an'ireo firenena malaza ho tsy demaokratika na mpanao “famoretana” (zavatra noresahiko tao amin'ny bokiko vaovao, Ny Revolisionan'ny Famahanana Bilaogy) ny raharahan-tsivana amin'ny aterineto amin'ny ankapobeny. Mamaky tsy tapaka ny tatitra momba ny fitondrana any Shina na Iran isika amin'ny fanakanana ireo tranonkala “mpanakorontana” tsy tambo isaina noho ny antony mazava amin'ny tombontsoa ara-politika.
Nitatitra ny OpenNet Initiative fa:
Hatramin'ny nifidianan'i Aostralia ny Praiminisitra tamin'ny faramparan'ny taona 2007, niresaka mivantana momba ny fampidirana ny tolo-kevitra toy izany ilay mpitarika Kevin Rudd (zavatra nohazavaiko tamin'ny antsipiriany nandritra ny kabariko tamin'ny Vovonana Global Voices ho an'ny Fampitam-baovaon'Olon-tsotra tany Budapest tamin'ny taona 2008.)
Ny tsy fahombiazany sy ny tsy fahampian'ny fileferana (zavatra efa niadian'ny mpanara-maso hevitra) no olana voalohany amin'ny tolo-kevitra. Mba hanasarotana kokoa ny olana dia nanaraka ity fanivanana ny aterineto ity tany amin'ny fanjakana sasany ny governemanta ka tsy fahombiazana no vokatr'izany .
Nahoana àry no mandroso hatrany? Miresaka momba ity olana ity ilay bilaogera Aostraliana fanta-daza ao amin'ny bilaogy Somebody Think of the Children ary manazava izany tsara kokoa:
Mampiahiahy fa tsy naha-taitra ny fampitam-baovao virtoaly loatra ireo tolo-kevitra tany Aostralia raha toa ka voalaza fa tsy fantatra na handray anjara amin'ny fandaharanasa ny mpamatsy tolotra aterineto na tsia, fa mbola “miankina amin'ny natioran'ny andrana” izany, araka ny filazan'ny mpisehatra lehibe iray.